Ita sebhizimusi rehurumende, uye ita basa rakanaka mukudzivirira denda nekudzora uye kutangazve basa nekugadzira.
Mukutarisana nedenda, Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yakapa mutambo wakazara kumweya wekuva bhizinesi rehurumende rekugadzira, uye yakatangazve basa zviri pamutemo musi wa10 Kukadzi 2020. Ndichiri kuita basa rakanaka mukudzivirira uye kudzora denda...
Makorokoto nekubudirira kuunza maviri 162m3 LNG mafuta matangi
Musi waKubvumbi 28, 2021, Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yakazvimiririra, yakagadzira uye kugadzira maviri162m3 Marine matangi akapedza uye akaunzwa. Iyo 162m3 peturu tank chirongwa cheDNV-GL classification Society icho BTCE chakaita nekudzikama ...
Mapurojekiti maviri e180m3 LNG matangi emafuta akaitwa neBTCE akapedzwa zvinobudirira uye akaunzwa!
Musi waChivabvu 21, 2021, Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yakazvimiririra, yakagadzira uye yakagadzira maviri 180m3 Marine matangi (kusanganisira TCS system), ayo akapedzwa zvinobudirira uye kutumirwa. Iwo maviri 180m3 Marine deck matangi achaiswa kune 8,500m3 C-...
na admin pa 21-06-02
Munguva yechando ye2017, nzvimbo dzakawanda dziri kuchamhembe kwenyika yangu dzakasangana ne "kushomeka kwegasi". Tichifunga izvi, muna 2018, National Development and Reform Commission uye National Energy Administration vakabatana vakaburitsa "Maonero eKumhanyisa Kuvakwa kweGasi S...
Musi wa30 Mbudzi 2019, Tianhai Cryogenic akasaina odha nyowani yemakumi mashanu cubic metres ekunze LNG matangi emugungwa. Iri LNG tangi remugungwa rinoshandiswa mune 2 * 1500Kw port tugboat chirongwa muSingapore. Zvinoenderana nezvinodiwa zvepurojekiti, chimiro cheiyi 50 li LNG marine tank yakakosha zvakanyanya. ...
Makorokoto kuna Tianhai Cryogenics nekuunza kwakanaka kwemaseti maviri e170 litre matangi emugungwa ekutakura!
Kuenderera mberi hunyanzvi hwekushandira vatengi Musi waChivabvu 10, 2020, matangi maviri emugungwa ane 170 akagadzirwa uye akagadzirwa neBeijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. akasvika paLiaonan Shipyard uye akatumirwa zvinobudirira. Aya maviri 170-akamira matangi emugungwa anoshandiswa mu ...